यस अनुप्रयोगको साथ तपाईको म्याकबुक प्रोको टच बारमा ह्याप्टिक प्रतिक्रिया थप्नुहोस् म म्याकबाट हुँ
यो सबैलाई थाहा छ कि यस वर्ष एप्पलले सुरू गरेको नयाँ म्याकबुक प्रो मोडेलहरू किबोर्डको शीर्षमा एक सानो OLED स्क्रिन छ जसले देखाउँदछ, उदाहरणका लागि, सबै "प्रकार्य" कुञ्जी वा "एस्केप" कुञ्जी। यो हो टच बार भनेर चिनिन्छ। तपाईं अधिक पहुँच बटनहरू थप्न सक्नुहुन्छ, दुबै ल्यापटप कार्यहरू र तेस्रो-पार्टी अनुप्रयोगहरूको लागि। अब, सबै परिदृश्यहरूमा, जब प्रयोगकर्ताले यी कुनै भर्चुअल कुञ्जीहरू कुनै पनि थिच्दछ तिनीहरू कुनै प्राप्त गर्दैनन् प्रतिक्रिया तपाईले राम्रोसँग थिचिएको छ भनेर जान्न।
निश्चित रूपमा टच बार अपरेटिंग को यो तरिका तपाईको लागि पहिले नै राम्रो छ। अब, यदि तपाईंलाई प्रत्येक प्रेसमा प्रतिक्रिया प्रस्ताव गर्न साचो कुञ्जीहरू आवश्यक छन् भने, त्यहाँ एउटा अनुप्रयोग छ जुन यो समाधान गर्दछ। यसको नाम «ह्याप्टिक टच बार is हो र तपाईंसँग डाउनलोड गर्न नि: शुल्क संस्करण छ जुन १ 14 दिनको लागि कार्यशील हुनेछ।
एक पटक यी दुई हप्ता परीक्षण बितिसकेको छ, क्रम जारी राख्न को लागी अनुप्रयोग, तपाइँ चेकआउट मा जानु पर्छ र $ 4,99 तिर्नुहोस् (परिवर्तन गर्न को लागी e.२० युरो)। अब, यस ह्याप्टिक टच बारले तपाईंलाई के प्रस्ताव गर्दछ? ठीक छ, एक पटक स्थापित, तिनीहरू मा भन्छन् रूपमा iDownloadBlog, तपाईं यी कुञ्जीहरूको प्रतिक्रिया अनुकूलित गर्न सक्नुहुनेछ। त्यो भन्नु पर्ने हो, तपाईं यस प्रतिक्रियाको तीव्रताको डिग्री छनौट गर्न सक्नुहुनेछ जुन विभिन्न तीव्रतामा वितरण हुन्छ जुन संख्या १ देखि go सम्म जान्छ.
त्यस्तै गरी, आइकन माथिल्लो मेनू पट्टीमा देखा पर्नेछ जहाँ तपाईं हेल्पिक टच बारले प्रस्ताव गर्ने सबै विकल्पहरू पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईं आफ्ना टिप्पणीहरू पठाउन सक्नुहुनेछ (प्रतिक्रिया) विकासकर्तासँग, साथै प्रत्येक पटक तपाईंले ल्यापटप खोल्दा वा अनुप्रयोगबाट बाहिर निस्केर अनुप्रयोग सुरुवात गर्नुहुँदा। त्यस्तै गरी, यो पनि औंल्याइएको छ ह्याप्टिक प्रतिक्रिया मात्र दिइन्छ जब किबोर्डको पारंपरिक कुञ्जीहरू टच बारमा प्रदर्शन हुन्छन्। त्यो हो, ती सबै फंक्शन कुञ्जीहरू साथै एस्केप कुञ्जी। यदि हामी यस भण्डारबाट बाहिर जान्छौं भने ह्याप्टिक टच बारले काम गर्दैन। यो यहाँ छ जहाँ हामी यसको ठूलो दोष र यसको सबैभन्दा ठूलो अवरोध पाउन सक्छौं4भन्दा थोरै यूरो भुक्तान गर्न लाईसेन्सको लायक छ। अब, जब विकासकर्ताले पोर्टलमा वर्णन गरे, उनी ह्याप्टिक टच बारमा अधिक अनुकूलताको लागि काम गर्दैछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: म म्याकबाट हुँ » म्याक प्रोग्रामहरू » म्याकको लागि अन्य अनुप्रयोगहरू » यस अनुप्रयोगको साथ तपाईको म्याकबुक प्रोमा टच बारमा ह्याप्टिक प्रतिक्रिया थप्नुहोस्
एप्पल टिभी टिभीओएस ११ र तपाईंको एयरपड्सको साथ राम्रो र उत्तमसँग जान्छ